whiten Ezé | Best Way to whiten Ezé Guide
posts akpado "whiten ezé"
Enwere ụzọ maka ị pụrụ ime iji whiten ezé gị n'enweghị? Ọ bụghị ihe niile nke kasị mma ma ọ bụ nwere ike obi. Isiokwu a tụlere pụtara ụzọ dị mma ezé na-elekọta ma na udo.
Ọ bụrụ na ị chọpụta na ị na-ata ahụhụ site chịngọm uche abụọ-hour ibe, ị kwesịrị ị na-agbalị iwepu ibe mgbe 30 nkeji kama. Mgbe ọ dị mkpa itinye ibe ugboro abụọ n'ụbọchị maka 30 nkeji karịrị otu oge nke izu abụọ, ha na-adịghị dị ka o yiri ka ime ka chịngọm uche.
NDỤMỌDỤ! Gị dọkịta ezé nwere ike ime ezé whitening na a laser. Nke a nwere ike ịbụ kacha mfe na-enwe ezé gị aghọ azụ ha mbụ na-acha ọcha na agba.
A na-achọ ka ị gaa na gị dọkịta ezé na gị pụta bụ abụọ ka ọ dịghị onye. Ụlọ nwere ike na-enye ụzọ whiten ezé gị na ga-adị oke ize ndụ n'ihi laypeople iji ke ufọkurua.
Ịnọgide na-enwe na-acha ọcha ezé, ị kwesịrị ị na-enwe mgbe nile ọkachamara cleanings mere. Ịtọọ oge a gara dọkịta ezé ọ bụla ọnwa isii, kwesịrị na-eme ka gị ọzọ oge atọrọ mgbe ị n'ebe ọ bụla ihicha. Ị kwesịrị ị na-agbalị na-a oru ebe ọ bụ na ọtụtụ insurances ekpuchi a usoro.
NDỤMỌDỤ! -Akọ mgbe eri ma ọ bụ na-aṅụ mgbe ị whiten ezé gị. Whitened ezé ndị ọzọ susceptible ka stains.
Laser whitening ezé bụ otu n'ime ndị kasị mma nhọrọ mgbe a bịara whitening gị dọkịta ezé-enye. Nke a bụ ma eleghị anya na ndò ha bụbu onye ngwa nleta. A bleaching gị n'ụlọnga na-etinyere ka ezé, mgbe ahụ, ha na-gbara na a laser iji rụọ ọrụ. The ezé bụ n'otu ntabi site ise ma ọ bụ isii shades.
Ị nwere ike na-aghọtakwu ụfọdụ ezé whitening na ngwaahịa. Ọ bụ ezie na ọ pụrụ ịbụ a nwa oge ọnọdụ, o nwere ike ka na-ewute. Ọ bụrụ na ị na-enwe a mgbu, kwụsị iji ngwaahịa na ịhụ dọkịta eze ozugbo na ị nwere ike. Gị dọkịta ezé ike na-enye dị iche iche na ngwaahịa ma ọ bụ ihe ngwọta na-enyere whiten ezé gị na a enweghi mgbu n'ụzọ.
NDỤMỌDỤ! Tinye mmiri soda ka ezé gị brushing eme. Banking soda bụ ụzọ kasị mma n'ụzọ dị irè na-adịkarị whiten ezé gị.
The ọgwụ na niile nke ndị a na ngwaahịa n'iku ọzọ kpamkpam site bonding ka ezé gị. The abrasive mmetụta ewepu mkpịsị aka brushes na-eme ka ahụ n'aka gị ezé dị ọcha.
Strawberries ndị a ukwuu eke ọgwụgwọ maka ezé mgbachu. Nke a na usoro e nwapụtaworo na-arụ ọrụ. Nke bụ eziokwu bụ, rubbing a ịkpụ strawberry on ezé gị nwere ike whiten ha. Ka tomato fọdụrụ maka gburugburu nkeji ise na ezé gị na-arụpụta ihe kasị mma nke ọgwụgwọ.
NDỤMỌDỤ! Ọ bụrụ na ị na-eji ihe ọ bụla nha nha-whitening na ngwaahịa, -akwụsị ozugbo ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla iyatesịt amalite. The uche nwere ike ịbụ a-egosi na ị ndibiat ezé gị.
Ị n'ezie kwesịrị ịga dọkịta ezé tupu whitening ezé gị ma ọ bụrụ na i nwere untreated cavities ma ọ bụ na-ata ahụhụ site na ọrịa agbụ. Ị ga-akpụrụ mmezi elekọta mgbe whitening ezé gị. Gị dọkịta ezé ga-enwe ike ịgwa gị chọta nte bụ ndị kasị dị irè ma dị nchebe n'ihi na ị na-eme otú ahụ.
Nwere ike ị chọrọ nwere a ọkachamara whiten ezé gị ma ọ bụrụ na ị na-achọ ngwa ngwa pụta ma ọ bụ i nwere nnọọ njọ staining. Usoro a na-efu a obere ihe, ma ike mma whiten ezé gị na ike ịdị na-agbakarị ndị ọzọ whitening ụzọ.
NDỤMỌDỤ! Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ese siga mgbe ahụ ihe mbụ ị ga-eme bụ ịkwụsị ise sịga. Ọ bụrụ na ị na-aṅụ sịga, whiten ezé gị, na mgbe ahụ na-anọgide na-amụnye, ị na-flushing gị ego gị pụọ.
Ibe na whiten Ezé ọnụ na-ukwuu ọnụ. Ndị a ibe na-etinye na ezé gị. Whitening ibe ụtọ a nkenke anya na ewu ewu, n'ihi na-ezughị okè na-arụpụta.
Ọ bụrụ na ị na-aṅụ ihe ọṅụṅụ na nke nwere ike ime staining, -eso ha na mmiri. Nke a nwere ike igbochi gị ezé si ịlụ ntụpọ. Ọzọ nhọrọ bụ na-aṅụ ndị a site a ahịhịa, ma ọ bụ na-eji ndị na-abụghị mmiri ara ewepụrụ abụba na kọfị gị.
NDỤMỌDỤ! Mgbe whitening ezé gị, tinye Vaseline na-echetara gị na-amụmụ ọnụ ọchị. Ezie na ọ pụrụ ịbụ tastiest nhọrọ, na petrolatum jelii ga-etolite a na-echebe, nwa oge mkpuchi na ga-egbochi staining.
Zere adịghị adị mouthwash, karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere na-agba kwukwara. Mouthwash pụrụ n'ezie ime ka ezé gị emekwu ihe discolored. Ọzọkwa, a otutu n'ime ha nwere mmanya dị ka ihe mgwa nke pụrụ ime ka ire gị na goms enwe mmetụta ọsọ ọsọ, nakwa dị ka na-adaba gị n'ọbara.
NDỤMỌDỤ! Ị ga-enwekwu obi ike banyere ọnụ ọchị gị ma ọ bụrụ na ị bụ ọzọ nwee obi ike banyere gị ume. Ira ihe azụ gị dị ọcha aka ikpebi ma ọ bụrụ na i nwere ihe ọjọọ ume.
Organic aki oyibo mmanụ bụ a whitening gị n'ụlọnga maka ezé gị. n'ihi na dị nnọọ 10 nkeji a ụbọchị, -agbalị ṅachasịrị na aki oyibo mmanụ maka dịkarịa ala 10 nkeji ụbọchị ọ bụla. Mgbe ihe dị ka 10 nkeji, itucha ọnụ gị si na ahịhịa dị ka ị ga-eme. Ị ga-ahụ pụta mgbe naanị ụbọchị ole na ole.
Mara ihe ezé gị whitening usoro a na-aga imere gị. Ọ bụrụ na ị nwere uche na-adịghị n'echiche dị iche iche banyere ngwaahịa ị na-eji, ị nwere ike ifufe ndakpọ olileanya whiteness ezé gị. Tụlee nke a metụtara, dị ka afọ gị, na ókè stains na discolorations on ezé gị. Gwa onye gị na dọkịta ezé ihe na-atụ anya.
NDỤMỌDỤ! Ịta ọhụrụ pasili ma ọ bụ cilantro pụrụ inyere gị aka dịtụrụ gị ọnụ ọchị. Ndị a eke herbs agụnye Njirimara nke nwere ike inyere ke neutralizing Unyi-eme ka nje bacteria.
-Asa ezé mgbe eri bụ akụkụ dị mkpa nke na-edebe ha na-egbuke egbuke ma na-egbu maramara. Nke a dị mkpa karịsịa mgbe ị na-aṅụ kọfị.
Ọchịchịrị nri ahụ nwere ike ime ka ọnụ gị n'iku karịrị oge. Zere ndị a stains site ịta a sugar free chịngọm mgbe nri. Nke a ga-achụpụlighị nri ọ bụla ahụ ma na-ha si staining ezé gị.
NDỤMỌDỤ! Agụnye oge flossing gị eme kwa ụbọchị. Nke a nwere ike inyere tufuo gị ihe e dere ede nwere ike discolor ezé gị.
Strawberries bụ ụzọ dị mfe iji ndammana dịtụrụ gị ezé egosi acha ọcha. Strawberries nwere ike mere egosiwo na ya pụta dị ka ihe dị mma mmetụta gị whitening ezé usọbọ. Ekwe ka strawberry na ịnọgide ezé gị dịkarịa ala nkeji ise maka nsonaazụ kacha mma.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ezé gị na-acha ọcha, adịghị erichapụ ihe oroma ma ọ bụ ndị ọzọ citrus mkpụrụ. Ọzọkwa gbalịa ka ị ghara ịṅụ mmanya ha juices. The asịd na ndị a ihe oriri ga-eri efep ke ezé gị. Ọzọkwa, ya a pụtara na ụdị mkpụrụ osisi na ihe ọṅụṅụ enwekwu ohere maka acid reflux ma ọ bụrụ na iwesa tupu bed, nke n'aka nke na-emetụta ọnụ ọchị gị. Ya mere, -agbalị karịsịa izere ndị a ihe oriri na juices n'abalị.
NDỤMỌDỤ! -Agụnye ihe Mmiri ara ehi na ngwaahịa na ihe oriri gị. Strong, ike ezé nwere ike ekewet ndị nri na oriri dị ka bred, ara-ehi na cheese.
I nwere ike inwe a whitening concoction n'ụlọ na peroxide na mmiri soda. Iji nke a ngwakọta-asa ezé gị ruo ihe dị ka nkeji iri gafeworonụ. Kpachara anya otú ike na ị abọ, dị ka ọ pụrụ ime ka chịngọm iyatesịt.
A mfe usoro maka acha ọcha ezé bụ mix table nnu na lemon ihe ọṅụṅụ. Na-na ngwakọta ọ bụla kaa akara akpa, nke mere na i nwere ike iji ya mgbe ọ ga adịkarịghị emebi.
NDỤMỌDỤ! Aṅụ site na a ahịhịa ike nyere aka gbochie ezé stains. Site n'ịṅụ site a ahịhịa, iwedatara oge na ezé gị na-gụrụ mmiri mmiri.
Bacteria ga-eto gburugburu ọnụ gị mgbe ị na-eri. Ọ bụrụ na ezé gị na-adịghị kpochara, ndị bacteria nwere ike ime ka a ọtụtụ nsogbu, otú icheta ahịhịa ha.
Were mịrị amị n'ọnụ mmiri epupụta na mịrị amị oroma peels na Mike ha a powder. Tinye a ikwommiri nke mgbata mmiri ka powder, na ọ ga-ntabi-eme ka a eke ezé whitening ntacha eze. Nke a nwekwara a hụrụ gbochie ndị ọzọ metụtara ezé gị.
NDỤMỌDỤ! Mkpụrụ nwere ike ji mee ihe dị oké, eke, mma n'ụzọ na-whiten ezé. Strawberries arụ ọrụ karịsịa ọma n'ihi nzube a.
Ọ bụrụ na ndị trays adịghị dabara ezé gị nke ọma, ọgwụ si whitening jel nwere ike seep si dapụtara na chịngọm iyatesịt.
Ụfọdụ eke ịgba akwụkwọ ga-enyere whiten ezé, dị ka apple cider mmanya. Ọ mara sachapụkwa ezé gị na-ewepụ stains mgbe wepụ bacteria n'ọnụ gị. Gbalịa gargling mmanya banyere otu ugboro n'ụbọchị tupu ị asa ezé gị.
Ọnụ ọchị gị ga-ele anya onwunwu. Agbalị iji egbugbere ọnụ na agba na a lipstick na anya-acha anụnụ anụnụ dabeere na ma ọ bụ na-eji egbugbere ọnụ gloss. Agba ndị acha anụnụ anụnụ-tined reds ma ọ bụ tomato enyere gị ezé egosi acha ọcha. Zere matte egbugbere ọnụ na ngwaahịa ka ha nwere ike ime ka ezé gị.
Na-aṅụ mmiri mgbe na-ewe ọṅụṅụ na n'iku ezé nwere ike na-ezé gị. A mmiri itucha egbochi-ahụ ntụpọ na-eme ka ihe ọṅụṅụ si setting.You nwekwara ike na-aṅụ site ahịhịa.
Eme ka ụfọdụ na ị abọ, floss, na-eji a chịngọm ịhịa aka n'ahụ ọ dịghị ihe ọzọ ugboro abụọ n'ụbọchị. The kasị kacha ụzọ iji hụ na gị ezé bụ ahịhịa na floss oge ọ bụla ị na-eri ma ọ bụ ṅụọ ihe ọ bụla. Otú a ị pụrụ ijide n'aka tufuo nri irighiri na ihe e dere ede na ike ejedebe staining ezé gị.
strọberị tapawa pụrụ inyere gị aka whiten ezé. Mash ọhụrụ strawberries n'ime a tapawa, wee tinye ngwakọta gị ezé. The strawberry gara aga ga-eme ka ezé gị na-acha ọcha na-enweghị mkpa n'ihi na aka ike ọgwụ. Nke a home whitening usoro nwere ike inyere gị aka izere n'elu-whitening na-enye gị a ndammana ọcha ọnụ ọchị.
Mouthwash nwere ike na-eme ka ụfọdụ ezé gị. Gwa onye gị na dọkịta ezé ma ma ọ bụ na i nwere ezé nwere ike idi nsogbu ndị na-eji mouthwash.
Site ugbu a na ị maara na e nwere ndị a otutu echiche na isiokwu nke whitening ezé. Ị kwesịrị ị na-enwe ụfọdụ echiche ugbu a banyere otú e si nweta na pearly na-acha ọcha ọnụ ọchị na-enweghị na-ebibi gị ezé. Mejuputa ndụmọdụ n'isiokwu a na n'enweghị aga banyere-eme ka ọnụ ọchị gị chawapụrụ.
Ihe site whiten Ezé Guide - June 5, 2016 na 12:51 AM
Categories: Whiten Ezé Atụmatụ Tags: Bright White Ọchị, Esi A Bright White Ọchị, otú whiten ezé, whiten m ezé, whiten ezé, whiten ezé gị, Yellow ochi
whiten ezé , Ezé whitening ngwaọrụ , Nha nha whitening na ngwaahịa
Na-mara mma onwunwu ezé na-a dream nke fọrọ nke nta ka onye ọ bụla na ma eleghị anya nke gị. Ọ bụrụ na gị ezé ga-anọgide odo ma ọ bụ ndị gbara ọbụna mgbe mgbe nile brushing ezi ntacha eze, ị nwere ike mkpa iji ihe ọ bụla nke n'elu counter ezé enwu gbaa ngwa iwu na a mgbe niile. E nwere ụyọkọ ụzọ kasị mma whiten ezé na ahịa na na-online i nwere ike na-ahọrọ. Otú ọ dị, ha niile anaghị arụ ọrụ otu na whitening ezé. Ụzọ kasị mma whiten ezé -arụ ọrụ mma na ngwa ngwa, mgbe ala àgwà na ngwaahịa na whiten ezé na-adịghị. Iji ọnyà ezé enwu gbaa ngwa iwu ndị dị otú ahụ dị ka ọnụ trays, whitening gels, whitening ibe dị mma nhọrọ maka na-eme ezé gị acha ọcha, ma ndị dị otú ngwa iwu na-ahapụ mmetụta. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị na-achọghị iji ndị dị otú ahụ ngwa iwu. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ha mgbe ahụ i nwere ike na-ahọrọ home ezé whitening dị otú ahụ ụzọ kasị mma whiten ezé Maka ezigbo ma na ngwa ngwa n'ihi.
E nwere ọtụtụ ihe, nke nwere ike ime ka ezé gị discolored. Ịṅụ sịga, ịta ụtaba, aṅụ mmanya uhie, soda, tii na kọfị nwere ike ime ka ezé discolored. Ya mere,, iji mee ka ezé gị acha ọcha, ị ga-akwụsị ndị dị otú ahụ na-emebi àgwà mbụ. The eke usoro nke ịka nká na ọgwụ ụfọdụ dị ka ígwè Mmeju, vitamin Mmeju, na ụfọdụ ọgwụ nje pụkwara imetụta agba nke ezé. Ebe a bụ ụfọdụ mfe, ngwa ngwa na ụzọ kasị mma ka whiten ezé ịgba akwụkwọ.
Ụzọ kasị mma whiten ezé
Ị nwere ike iji a home ezé whitening ngwaahịa na- ụzọ kasị mma whiten ezé ime ka ezé acha ọcha. Ndị dị otú ahụ a ngwaahịa bụ ọnụ na mfe iji. Ọzọkwa, i nwere ike iji ndị dị otú ahụ na ngwaahịa na-enweghị aga bụla ọkachamara dọkịta ezé. A home ezé whitening kit n'ozuzu abịa na enwu gbaa ibe na ọnụ jel. Gị mkpa ebe a ụzọ kasị mma ka whiten ezé ngwaahịa dị ka eduzi on ezé gị ka mma n'ihi. Ọ bụrụ na ị chọrọ kacha na-atụ anya n'ihi, Debekwanụ ngwaahịa etinye na ezé gị tupu na-aga ụra n'abalị, n'ihi na ọ dịghị ihe ọzọ 10 nkeji. Ọzọkwa i kwesịrị iji ha na a mgbe niile.
Ọzọ ihe ọma, ma dị oké ọnụ ụzọ kasị mma whiten ezé nhọrọ bụ ịga leta a dọkịta ezé n'ọnụ ụlọ. Nke a bụ ihe ndị kasị ụzọ nke kacha mma ezé enwu gbaa. A dọkịta ezé n'ozuzu ọkọkpọhi enyemaka nke a ezé bleaching kit, laser ìhè na ezé mm uo ozi wụsara na ọnụ tree (kwesịrị ka e yiri tupu ya alakpuo ụra) ime ka onye ọrịa ahụ ezé acha ọcha. A ọkachamara ezé whitening ọgwụgwọ nwere ike na-eri gị ebe n'etiti 250 USD na 900 USD. Ọ bụ ezie na ọ bụ nnọọ oké ọnụ, ma ọ na-enye ihe kasị mma na-edi N'ihi.
Ị nwere ike iji home ezé whitening bekee bụ ndị ụzọ kasị mma whiten ezé -eme ka ezé gị mmerụ-free. Ị nwere ike iji mmiri soda na kwa hydrogen peroxide na-eme ka ezé gị acha ọcha. Ha abụọ bụ ndị magburu onwe bleaching elekọta mmadụ na aka ịcha ọcha ezé. The mmiri soda bụ abrasive na ọdịdị ma si otú na-enyere aka wepu stains na tartars. Ị nwere ike iji ha iche iche ma ọ bụ ọnụ site na-eme ka ezi onye na mado n'ime ha. I nwekwara ike fesa a tuo nke mmiri soda na ntacha eze mgbe brushing.
Ihe site whiten Ezé Guide - June 5, 2016 na 12:21 AM
Categories: Whiten Ezé Atụmatụ Tags: ụzọ kasị mma whiten ezé, dọkịta ezé n'ọnụ ụlọ, ezé bleaching kit, ezé enwu gbaa, Nha nha whitening na ngwaahịa, whiten ezé